I-7 ephezulu: Imidlalo xa Imvula. Phuma kuBoredom ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
I-7 ephezulu: Imidlalo xa kunetha. Phuma ekubandezelweni
Juni 24, 2019 0 IiCententarios 785
Kuyanetha kwaye awazi ukuba wenze ntoni? Ngaba unesithukuthezi kwaye utshixelwe endlwini yakho yimvula? Emva koko uyakuvuya ukwazi ukuba kwiposti elandelayo ndikuzisela i-7 imidlalo xa kunethayo Ukonwaba ngakumbi! Nokuba kusekhaya okanye kukho imvula, kuhlala kuhlala kumnandi kuwe.
Ngoko ke, sukuntywila. Qokelela izithandwa zakho ngexesha lemvula, kwaye wenze eli xesha libe ngumzuzu ongalibalekiyo. Ngaba ukulungele? Masiqalise!
1 Ndingubani -Wonke umntu uyazi ngaphandle kwakho
Kumdlalo olandelayo Uya kudinga intuition elungileyo, isikhafu, iphepha, ipensile, ityiphu, isitopu, isitya okanye umnqwazi, kwaye ungayidlala ngabantu be-6 okanye nangaphezulu.
Ayikhuthazwanga kubantu abalwa nesazisi sabo, kodwa yeyabo nobuchule kunye izikhwele. Hlanganisa abahlobo bakho ukuze wonke umntu akwazi ukuphendula umbuzo: ndingubani?
Ukuqala ukudlala, landela Ukulandela imiyalelo:
Sika iziqwenga zamaphephaUbuncinci ezintlanu ngomthathi-nxaxheba.
Banike abadlali ukuba babhale malunga nabo umlinganiswa othile, ubungcali okanye iilebheli ezo khankanya abantu. Umzekelo: Umchweli, uMdala, uMalume, uBarack Obama, njl. Ungawukhetha umxholo, umz. Iinkwenkwezi zeemovie.
Yongeza imitya, ugobe ngesiqingatha, kwisitya okanye umnqwazi.
Yahlula-hlula abadlali dos amaqela.
Vumelanani Ixesha ngalinye utshintsho. Inokuba malunga nomzuzu we-1.
Kwithuba ngalinye, umdlali ophuma kwelinye lamaqela, Uya kuthatha elinye lamaphepha ngaphandle kokufunda. Oku kufanele ukuba kuxutywe ebunzini ngeteyiphu enamathela, ukuze wonke umntu ayifunde ngaphandle kwakhe.
Injongo yomdlali khawufanise umlinganiswa ebambelele ebusweni. Ukwenza oku, iqela lakho liya kukhankanya amagama (hayi izivakalisi) ezinxulumene nokwaziwa kwakho. Banokusebenzisa ukubanceda ukunceda amaqabane abo.
Ukuba umdlali ebetha umlinganiswa, ungasusa elinye iphepha kwaye uqhubeke nokuqikelela de kuphele ixesha.
Iqela elinenxaxheba Baqikelele ngakumbi ubuntu.
2 Ndaya evenkileni ndathenga ... -Umdlalo ukwenza imemori
Ukuba ufuna ukuzonwabisa ngalo mdlalo, eyona mfuneko kukuba ube nenkumbulo elungileyo kunye ne-5 okanye abadlali abangaphezulu.
Ngumdlalo ofanelekileyo we ukukhumbula, kwaye awunyanzelekanga ukuba uye emarikeni. Ngaphantsi kwekhava, okhuselweyo emvuleni, wena nabahlobo bakho niyakuvavanya ukukwazi kwenu ukugcina ulwazi.
Bonke abadlali kufuneka bahlale kwisangqa.
Umthathi-nxaxheba ovula umdlalo kufuneka athi: "Ndiye emarikeni ndathenga:" kwaye khankanya ezinye into okanye ukutya. Umzekelo, bendinokuthi: "Ndithengile ndaya evenkileni ndathenga: tuna."
Umdlali obekwe ngasekunene kwakhe, kufuneka aqhubeke nomdlalo ukuphindaphinda isivakalisi esifanayo, kodwa ukongeza enye into. Ukulandela lo mzekelo, kuyakufuneka uthi: "Ndiye emarikeni ndathenga: i-tuna kunye ne-lettuce."
Ke, umdlali ngamnye kuya kufuneka khumbula izinto abathengi bangaphambili abazithengileyo kuye kwaye ongeze enye.
Ukuba umdlali libala Into ethile iya kuthi ke ingafaneleki.
Ophumeleleyo uya kuba ngumntu ophetheyo ukuhlala kude kube sekupheleni.
3 Iiklasi - Akukho magama, kuphela ukulinganisa
Yiba nesandla iphepha, isikhafu, ipensile, isitopu, isitya okanye umnqwazi, kunye ne-6 okanye ngaphezulu kwabadlali.
Ukuba abahlobo bakho, usapho kwaye uthanda iimidlalo, lo mdlalo ngowakho. Ngokusisiseko, malunga dlulisa umyalezo ngaphandle kokuthetha nelizwi ezinye okanye zikhuphe isandi esithile.
Las imiyalelo Zizo:
Caba ezimbalwa iziqwenga zamaphepha, malunga ne-6 kumdlali ngamnye.
Sabalalisa imitya yamaphepha phakathi kwabadlali. Kwinye nganye, baya kubhala ezinye Igama okanye isivakalisi. La magama anokuhambelana nesihloko esithile, umz.
Hlawula imitya ephepheni kwisitya okanye umnqwazi.
Cwangcisa i ixesha lokuhamba ngokujika, jika: 1 umzuzu.
Xa lithuba lakho, umdlali ngamnye uza kuza ngaphambili athathe iphepha kwisitya. Ngokulinganisa, Uya kudlulisela umyalezo obhaliweyo kwiqela lakho, ekufuneka ikhuphe igama okanye isivakalisi.
Ukuba iqela lichanekile kwaye ixesha alikho, umdlali udlala inokuthatha enye indima kwaye uqhubeke ngendlela efanayo. Ke njalo, kude kufike ixesha lokuphela.
Iqela eliphumeleleyo uqikelele amanye amagama.
4 Amagama angenasiphelo-ungaphelelwa ngamazwi
Uya kudinga izakhono ezininzi ngamagama kunye ne-5 okanye nabahlobo abangakumbi ukuqala ukudlala. Ngumdlalo wokuzonwabisa, apho umntu ngamnye othatha inxaxheba kufuneka athobele ingqalelo ukuba abafuni kulahleka.
Yiyo Umdlalo we isantya sengqondo, apho ukupela kakuhle nokwazi amagama amaninzi aphambili.
Abathathi-nxaxheba kufuneka bahlale kwi isangqa. Ziya kujikela zibaliwe, oko kukuthi, ngesandla sasekunene.
Umthathi-nxaxheba wokuqala uya kuthi igama. Ex: indlu.
Ngoku, umdlali olandelayo makatsho igama eliqala nge syllable yokugqibela ukusuka kwigama langaphambili. Ukulandela umzekelo, ukuba igama elidlulileyo lalisekhaya, lo mdlali unokuthi: i-toad.
Emva koko, umdlali olandelayo unokuthi: inkukhu, njalo njalo.
Umntu ngamnye othatha inxaxheba uhlala cwaka Kuba ungazi ukuba uthini, uya kukhululwa. Umdlali ohleli kumdlalo kude kube sekupheleni uya kuphumelela.
5 Kwimvula-Ngaphandle ungadlala imidlalo emininzi xa kunethayo
Sebenzisa iibhutsi kunye nokucinga kwakho Ukudlala wedwa okanye nabahlobo bakho. Nangona yonke imidlalo ekhankanyiweyo apha inokwenziwa ngaphakathi, ulonwabo lungafumaneka nangaphandle.
Ngaphezu kwako konke, kubantwana, kumnandi kakhulu ukuphuma ngaphandle ngokulula yonwabele imvula.
Nazi ezinye zeembono:
El ibhola Umdlalo ongcono wenziwa xa kunethayo. Nokuba ngabahlobo bakho okanye usapho, le midlalo idla ngokuxhaphaka.
Lungiselela a umkhosi wamanzi nabahlobo bakho Ngale nto uya kufuna iibhakethi okanye izikhongozeli onokuzalisa ngamanzi emvula.
Imisebenzi ye ukusukela okanye ukukhangelaNjengokuzifihla nokufuna, zinokuba yimidlalo engcono xa kunetha. Kuya kufuneka ulumke ungatyibiliki.
Tsiba imipu, ngaphezulu kweepanele skid malunga nabo.
Ngokulula imanzi Ngemvula
Dlala kunye naye udaka.
6 Treasure Hunt-Kulula ukuba nomfanekiso ngqondweni womdlalo xa kunethayo
Yiba nesapg (into okanye ibhaso), ubuchule kunye nendawo enkulu, kunye ne2 okanye abantu abangakumbi.
Umdlalo olungileyo xa kunethayo kufuneka ujike indlu yakho ibe Ihlathi laseAmazon, equlathe ubuncwane obukhulu. Ngenxa yemvula, kulula ukuba nomfanekiso ngqondweni wale meko, kwaye ujike lo msebenzi ube lixesha lokuzonwabisa, ngakumbi abancinci.
Khetha amagumbi oya kuyisebenzisa ukuyila ukuzingela ubuncwane. Banokuba baninzi okanye babe baninzi, kuxhomekeke kububanzi, abathathi-nxaxheba kunye nezinto zakho ezithile.
Fihla ubuncwane. Oku kunokuba yinto yokudlala, ukutya okutyayo, njl.
Deja imikhondo okanye iiriddles kwigumbi ngalinye, ukuze abadlali bakwazi ukuya kwicala elifanelekileyo. Sukwenza kube lula, kodwa kungabi nzima kangako, ngakumbi ukuba ngabantwana.
Owokuqala ukufumana ubuncwane, hlala naye ukuphanga. Nangona kunjalo, kwimeko yabantwana, abanye abathathi-nxaxheba banokufumana umvuzo ngenxa yemizamo yabo.
7 Imidlalo yebhodi-Yitya loo makhadi kunye neebhodi
Sonke sinabanye abagciniwe apho umdlalo webhodi oko kunokusikhupha siphelelwe lithemba ngeentsuku zemvula. Luluvo oluhle kakhulu ulonwabele usapho okanye nabahlobo.
Nazi ezinye onokuba unazo ekhaya:
Ngumdlalo wekhadi owaziwayo. Ngokusisiseko, injongo kukuphelisa amakhadi phambi kwabanye abadlali. Unobumba omnye kuphela oshiyekileyo, kufuneka khwaza kakhulu "nye!" phambi kwabachasi bakho, kungenjalo uya kuthatha elinye ikhadi.
I-jenga iseti yeenkuni okanye iibhloko zeplastiki malunga nobungakanani besandla sakho. Oku kufuneka kube ugcinwe edongeni, ngenani elifanayo leebhloko kwinqanaba ngalinye.
Abathathi-nxaxheba kuya kufuneka Susa iibhlokhi kulwakhiwo zibeke ngaphezulu. Iphulukane neyokuqala eyenza ukuba inqaba iwe.
Ukuxhamla wedwa ngumdlalo ofanelekileyo wosapho. Eyona nto iphambili kukufumana isixa esikhulu semivuzo, phakathi kwepropathi nemali. Thenga, thengisa kwaye wenze ishishini ukwenza ubukhosi bakho bokuthengisa.
Ukudibanisa iphazili ngumsebenzi lowo inokwenziwa ngaphakathi engenabantu. Ukuba unesithukuthezi kwaye akukho mntu unawe, unokuyaphula intloko yakho ngomdlalo woku. Ngaba unesibindi sokudibanisa enye yeenxalenye ze1000 okanye i-2000? Uninzi oluninzi lokumanyanisa, uya kuphazamiseka okwethutyana, ndiyakuqinisekisa!
Ukulungele? Sele uyazi ukuba wenzeni? Ungavumeli ixesha lihambe, hamba uye konwaba kunye nabathandekayo bakho ixesha elimnandi.
Phuma uye emanzini, udlale ibhola, okanye uzame iitshathi. Ixesha lemvula akufuneki ukuba lixesha lokuxakeka, kungenjalo ukuba wenza enye yezi imidlalo xa kunethayo
1 1 Ndingubani -Wonke umntu uyazi ngaphandle kwakho
2 2 Ndaya evenkileni ndathenga ... -Umdlalo ukwenza imemori
3 3 Iiklasi - Akukho magama, kuphela ukulinganisa
4 4 Amagama angenasiphelo-ungaphelelwa ngamazwi
5 5 Kwimvula-Ngaphandle ungadlala imidlalo emininzi xa kunethayo
6 6 Treasure Hunt-Kulula ukuba nomfanekiso ngqondweni womdlalo xa kunethayo
7 7 Imidlalo yebhodi-Yitya loo makhadi kunye neebhodi
7.3 Umntu onobuqhetseba
7.4 Iphazili yejigsaw
Yongeza ukusebenzisana kwakho! Funda ngendlela yokufumana abalandeli kwi-Instagram